रगत, आँसु र भेदभाव– जापानका ऐनु जनताको विगत र वर्तमान - Aarthiknews
रगत, आँसु र भेदभाव– जापानका ऐनु जनताको विगत र वर्तमान
टोकियो । जापानको होक्काइडोमा रहेको ओशिमा हन्टो प्रायद्वीपका सबैभन्दा दक्षिणी छेउमा एउटा मात्सुमा किल्ला रहेको छ । मात्सुमा सामन्तको रुपमा काम गर्थे जसले इडो अवधि ९सन् १६०३–१८६७० मा यो क्षेत्रमा शासन गरेको थियो ।
किल्ला नजिकै तीन प्रमुख कालो ढुङ्गाले बनेको ‘कानको चिहान’ छ। चिहानको छेउमा एउटा चिह्नले यसको उत्पत्ति बताउँछ– ऐनु मानिसहरू, होक्काइडोमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिहरूले मात्सुमा सामन्तको क्रूर शासन विरुद्ध लडे तर १६६९ मा असफल भए।
ऐनु नेताहरूको कान मात्सुमा सामन्तद्वारा काटिएको थियो र तीन कानहरुलाई चिहानमा गाडिएको थियो। ‘कानको चिहान’ ले प्राचीन समयमा गैर–ऐनु जापानीहरूको दमन विरुद्ध होक्काइडोमा ऐनु मानिसहरूको संघर्षलाई प्रकाश पार्छ।
बस्ने ठाउँमा दमन
ऐनु मानिसहरू आफ्नो छुट्टै भाषा र संस्कृतिका साथ उत्तरी जापानी द्वीपसमूहमा बसोबास गरेको विश्वास गरिन्छ। तर गैर–ऐनु जापानीहरू उत्तरतिर सर्दै जाँदा ऐनु क्षेत्र बढ्दो रूपमा सङ्कुचित भयो। इडो अवधिसम्म गैर–ऐनु जापानीहरू होक्काइडोको दक्षिणी भागमा अघि बढेका थिए । यद्यपि ऐनु मानिसहरूको अझै पनि यस क्षेत्रमा बस्ने ठाउँ थियो।
सन् १८६० को दशकको अन्तमा मेजी पुनःस्थापना भएपछि जापानी सरकारले होक्काइडोको विकास गर्यो। त्यो प्रक्रियामा ऐनु जनताले अभूतपूर्व उत्पीडन सहनुपरेको थियो। धेरै विज्ञहरूले आधुनिक होक्काइडो विकासको इतिहास ऐनुको रगत र आँसुको इतिहास भएको बताए।
ऐनु प्रतिरोधका जापानी इतिहासकार ग्यो शिन्याले मेइजी सरकारको नीतिमा दुई भाग रहेको बताए। एउटाले ऐनु जनताको जग्गा खोसेर होक्काइडोलाई टेरा न्युलियस घोषणा गर्दै सरकारलाई सबै जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने र गैर–ऐनु जापानीहरूलाई सस्तो मूल्यमा बेच्ने अनुमति दिएको थियो।
दोस्रो, ऐनु परम्परागत चलनहरू निषेधित थिए। ऐनुहरूलाई तिनीहरूको परम्परागत शैलीमा शिकार गर्न अनुमति दिइएन र तिनीहरूका छोराछोरीहरूलाई ‘शाही शिक्षा’ दिइयो।
ऐनु नीतिमा नागरिक परिषद्का सदस्य मासाहिरो कोइजुमीले ऐनु भाषा मात्रै वञ्चित हुनु मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको बताए। ऐनुलाई शिकार र माछा मार्न प्रतिबन्ध लगाइयो र जीविकोपार्जन गर्ने अधिकारलाई अस्वीकार गरियो।
झुकाव संरक्षण नीति
सन् १८९९ मामेइजी सरकारले ऐनुका लागि तथाकथित संरक्षण कानून लागू गर्‍यो। तर जापानका धेरै विज्ञ र विद्वानहरूले ऐनुलाई संरक्षण गर्ने दाबी गर्ने थुप्रै उपायहरू ऐनुलाई जमिनबाट वञ्चित गर्न, ऐनु चलनमा प्रतिबन्ध लगाउने र ऐनु भाषा, संस्कृति र तिनीहरूको भाषाको नामसमेत हटाउन प्रयोग गरिएको बताए।
मेइजी अवधिपछि त्यसपछिका जापानी सरकारहरूले ऐनु विरोधी नीतिहरू कायम राख्न र लागू गर्न जारी राखे। कुख्यात संरक्षण कानून सन् १९९७ सम्म समाप्त भएको थिएन।
सन् २००८ जुनमा जापानले पहिलो पटक होक्काइडोको आदिवासी जनजातिको रूपमा ऐनुलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दियो । विशेषगरी सन् २००७ सेप्टेम्बरमा आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा र आदिवासीहरूलाई संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनपछि जापानले मान्यता दिएको हो ।
सन् २०२० जुलाईमा दक्षिणी होक्काइडोमा ‘राष्ट्रिय सिम्बायोसिस’ को विषयवस्तु अन्तर्गत उपापोय राष्ट्रिय ऐनु सङ्ग्रहालय र पार्क खोलियो। जापानी सरकारले यसलाई ऐनु परम्परा र संस्कृति जोगाउने माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यद्यपि भर्खरैको भ्रमणमा सिन्ह्वाका पत्रकारहरूले मेइजी युगमा ऐनु मानिसहरूको रगत र आँसुको इतिहासको थोरै उल्लेख पाए।
“यो केवल एक पर्यटकीय सुविधा हो”, आइनु एल्डर युजी शिमिजुले एक सेमिनारमा भने, “सङ्ग्रहालयले ऐनु जनतालाई कुनै माफी नमाग्ने गरी जापानी परिप्रेक्ष्यमा आइनुको इतिहास बताउँछ। त्यसोभए तपाईं कसरी सिम्बायोसिसको बारेमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ रु”
गत वर्ष ऐनु नीतिमा नागरिक परिषद्ले होक्काइडो र अन्य ठाउँमा ऐनु जनताको सर्वेक्षण गरेको थियो। धेरैजसो ऐनुले जापानी सरकारको सहायता नीतिहरूलाई अस्वीकार गरेको, सरकारले मेइजी युगको अँध्यारो पक्षलाई कम गरेको र आदिवासी अधिकारका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गरेको नतिजाहरुले देखाएको थियो।
एकजना उत्तरदाताले सुविधाहरूले मुख्यतया ऐनु संस्कृतिलाई देखाएको तर ऐनुका मानिसहरूलाई मेजी सरकार अन्तर्गत बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको तथ्यलाई बेवास्ता गरेको बताएका थिए ।
जातीय भेदभाव विद्यमान
‘ऐनु’ जापानी भाषामा ‘आह, कुकुर’ जस्तै लाग्छ। सन् २०२१ मार्चमा ऐनुले जापानी टिभी कार्यक्रममा एक प्रतियोगीको विरुद्धमा विरोध गरे जसलाई शब्दको अपमानजनक प्रयोगका लागि बोलाइएको थियो।
जापानमा यस्तो घटना अनौठो छ। शिमिजुले आफूलाई विद्यालयमा दुर्व्यवहार गरिएको र अन्य विद्यार्थीहरूले गुफामा बस्ने व्यक्ति भनेर बोलाएको बताए। जापानी सरकारको सर्वेक्षणले पनि ऐनु विरुद्धको भेदभाव जापानी समाजमा निरन्तर समस्या भएको देखाएको छ।
सन् २०१६ मा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले गरेको राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार ७२।१ प्रतिशत ऐनु उत्तरदाताहरूले विभिन्न सामाजिक परिस्थितिहरूमा भेदभाव र असमान व्यवहारको सामना गरेको बताए।
जापानी लेखक सुनेहिरा फुरुयाले ऐनु विरुद्धको भेदभावको आधारभूत कारण भनेको सामान्य जापानीहरूले आफूले अन्य जातीय समूहहरूलाई आक्रमण गरेको वा सताएको विश्वास गर्दैन भन्ने बताए।
जापानी विद्यालयहरूले आज विद्यार्थीहरूलाई ऐनु संस्कृतिको बारेमा सिकाउने भए तापनि उनीहरूले उत्पीडन र भूमि अभावको कथा सुनाउन सकेका छैनन्। तसर्थ इतिहासको यो कालो पक्षबारे सामान्य जापानीहरूलाई थोरै थाहा भएको उनले बताए ।
उनका अनुसार हालैका वर्षहरूमा जापानका ऐतिहासिक संशोधनवादीहरू र रूढिवादीहरूले गलत ऐतिहासिक तथ्यहरूको कडा वकालत गर्दै आएका छन् । जस्तै ‘जापानीहरू सज्जन थिए र इतिहासमा न्यायको मूर्त रूप’ तथा ‘जापानले अरू राष्ट्रहरूमाथि कहिल्यै आक्रमण गरेन वा भेदभाव गरेन’ भन्ने दाबी गर्ने। उनले भने, “देशमा विभेद छ ।”
नागरिक परिषद्का कोइजुमीका अनुसार देशले ऐनुको इतिहासलाई पर्याप्तरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ। “जापानमा आफ्नो इतिहास बिर्सने बानी छ”, उनले भने, “र यो राम्रो होइन।” दिलिप अधिकारी/सिन्ह्वा
कोचबाम्बा, धरान र हर्क साम्पाङ
‘जेटिएले गभर्नर निलम्बन गर्ने अवस्था रहुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन’
पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउन सम्भव छ ? यसो भन्छन् विज्ञ
यसकारण सहकारीमा पैसा राख्न डराए सर्वसाधारण
उपत्यकामा नयाँ स्मार्ट सिटी बन्न सक्ला ?
‘गोल्ड स्टारका कर्मचारीमध्ये ६६ प्रतिशत महिलाहरु छन्’